Kedu ka Deepfake Technology ga-esi nwee Mmetụta Azụmaahịa? | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ikekwe ngwa mkpanaka m na-ekpori ndụ na afọ a bụ Mmeghe. Ngwa mkpanaka ahụ na-enye gị ohere iwere ihu gị ma dochie ihu nke onye ọ bụla na foto ọzọ ma ọ bụ vidiyo n'ime nchekwa data ha.
Gịnị Mere E Ji Akpo Ya Deepfake?
Deepfake bụ ngwakọta nke okwu Ịmụta nke ọma na adịgboroja. Deepfakes na-enyere igwe mmụta mmụta na ọgụgụ isi iji megharịa ma ọ bụ mepụta ọdịnaya anya na ọdịyo nwere nnukwu ikike iduhie.
The Mmeghe mobile ngwa dị mfe iji na-arụpụta nwere ike ịbụ nnọọ na-akpa ọchị. Aga m ekekọrịta ụfọdụ nsonaazụ m ebe a. Akụkụ akụkụ… ha abụghị nnọọ aghụghọ, dị nnọọ ihere, na-eyi egwu, na hilarious.
Deepfakes Ha Na-atụ Egwu Karịa Ihe Na-atọ ọchị?
O di nwute, anyi bi n'ime uwa ebe ihe omuma bu otutu. N'ihi nke a, teknụzụ miri emi bụ nke enwere ike ghara iji ya mee ihe mgbe niile dị ka ihe na-emeghị ihe ọjọọ dịka ịme m egwu egwu ma ọ bụ kpakpando na fim… enwere ike iji ha kesaa ihe omuma.
Iji maa atụ, were onyonyo, ọdịyo, ma ọ bụ vidiyo nke na-eji teknụzụ miri emi iji guzobe ọchịchị. Ọbụlagodi na amatara ya dị ka miri emi, nsonaazụ ya nwere ike ịga ọsọ ọsọ nke mgbasa ozi mmekọrịta iji gbanwee echiche ndị ịtụ vootu. Ma, ọ dị nwute, ọnụọgụ dị ịrịba ama nke ndị ntuli aka - ebe ọ dị ntakịrị - nwere ike ikwere ya.
Nke a bụ nnukwu vidiyo sitere na CNBC na isiokwu:
Dị ka ị nwere ike ịghọta, ndị na-achịkwa na teknụzụ nchọpụta na-aghọ ihe ama ama iji gbalịa ịlụ ọgụ na teknụzụ miri emi. O doro anya na ọ na-aga na-akpali…
Kedu ka enwere ike isi jiri Deepfakes mee ahia?
The teknụzụ iji mepụta mgbasa ozi miri emi bụ oghere mepere emepe ma dị na ntanetị niile. Mgbe anyị na-ahụ ya na oge a na film (footage nke Carrie Fisher si 1970 e ji na a miri emi na Rogue One), anyị ahụbeghị ha na ahịa… ma anyị ga-.
Ntụkwasị obi dị oke mkpa na mmekọrịta ọ bụla n'etiti ndị na-azụ ahịa na akara. Wezuga nkwanye iwu, azụmahịa ọ bụla na-achọ itinye teknụzụ miri emi na azụmaahịa ha na azụmaahịa ha ga-aga nke ọma… mana a na m ahụ ohere:
Mgbasa ozi nkeonwe - ụdị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi maka naanị ebumnuche nke ime ka ndị ahịa ha tinye onwe ha. Dị ka ihe atụ, cheedị banyere ndị na-emepụta ejiji, na-enyere mmadụ aka itinye ihu ha na ahụ ha na vidiyo na-agba ọsọ. Ha nwere ike ihu otu ejiji na-ahụ anya (na mmegharị) na-enweghị ike ịnwale uwe ahụ.
Nkewa mgbasa ozi - Ndekọ na idezi vidiyo nwere ike ịdị oke ọnụ ma akara na-etinyekwu uche na nnọchi anya nke omume igwe mmadụ na ọdịnala ndị egosipụtara. N'ọdịnihu dị nso, akara nwere ike idekọ otu vidiyo - mana jiri teknụzụ miri emi kesaa ozi ahụ iji gosipụta ụdị mmadụ na ọdịbendị dị iche iche n'ime ya.
Ngwakọta vidiyo - ụdị nwere ike ịnwe ndị nnọchi anya ahịa ha ma ọ bụ ndị isi na kpakpando na vidiyo ndị miri emi mana haziri ahazi iji kwurịta okwu na atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa. Typedị teknụzụ a adịlarị na ikpo okwu Mmekọahụ. Ọ bụ ezie na m kwenyere na ụdị kwesịrị igosipụta omimi ahụ, nke a bụ usoro na-adọrọ anya iji gwa onye ọ bụla okwu n'onwe ya.
Mgbasa ozi sụgharịrị - ụdị nwere ike iji ndị na-eme ihe ike gafere asụsụ. Nke a bụ ihe atụ dị egwu nke David Beckham - ebe ọdịdị ya ga-adọta uche, mana atụgharịrị ozi ahụ nke ọma. N'okwu a, ha na-eji olu ndị ọzọ na teknụzụ miri emi maka mmegharị ọnụ… mana ha nwekwara ike iji miri emi iji dochie ụda ahụ.
N'ihe atụ niile a, ihe omimi abụghị maka iduhie kama ọ bụ iji meziwanye nkwukọrịta. Ọ bụ gịrịgịrị… na azụmaahịa ga-akpachara anya na-eje ije na ya!
Ka anyi mechie nke a na ezigbo ederede…
Ngosi: M na-eji m Mgbakwunye njikọ maka Ngwa ngwa. Ana m akwado ịkwado ụgwọ a na-akwụ ụgwọ nke na-enye ụda mgbasa ozi ọzọ iji gbasaa.
Tags: Mgbakwunyemmụta miri emimiri miriteknụzụ miri eminụgharia